Carabayn – Kaasho Maanka
Ma magac diimeed baa jira?
In badan baad maqlaysaa dadkeena Soomaaliyeed oo leh hebel magaciisu maaha magac Islaam. Ma is waydiisey inay jiraan magacyo diimeed oo samada laga soo dhiibey? Diintaada ama dhaqankaaga iyo magacaagu ma yihiin wax isku xidhan. Sida runtu tahay diimuhu waa dad samee dadka ayaana asal ah. Mana jiraan magacyo diimeed oo liiskooda samada lagasoo dhiibey. Sidoo kale ma jirto diin la timi qorshe...
Gumaysiga reer Yurub iyo gumaysiga carbeed waxyaalaha ay xagga soomaalida ku ka la duwan yihiin waxaa ka mid ah in gumaysiga carabta aynu raalli ka nahay oo aynu ku faraxsan nahay, halka gumaysiga galbeedka aynu neceb nahay, laakiin aynu ku khasban nahay. Carabta waxa aynu u aragnaa in ay Eebbe wakiil i nooga yihiin oo uu i noo soo diray maaddaama uu Maxamed carab ahaa. Yuhuudda oo uu Maxamed ka...
Wahaabiyada iyo aqoonta casriga ah
Wadaaddada wahaabiyada ahi waxa ay aqoonta casriga ah u haystaan wax uu cadow leeyahay oo duullaan ku ah diinta islaamka. Waxa ay u arkaan in uu cilmigu xaqirayo diintooda oo ay cadowga diintu maleegayaan dhagar dadka diinta laga jeedinayo oo lagu jeedinayo adduunyo. Si ay cilmiga isaga difaacaan bay marmar tartan la galaan oo waxa ay sheegtaan waxyaalo yaryar oo waayo hore caalamka islaamka laga...